Yakakura kurongeka munhoroondo: United inowedzera 270 Boeing uye Airbus jets kune zvikepe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Yakakura kurongeka munhoroondo: United inowedzera 270 Boeing uye Airbus jets kune zvikepe
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
"United Inotevera" inosanganisira kuwedzera kwe200 Boeing 737 MAX uye 70 Airbus A321neo pamwe nezvirongwa zvekudzorera 100% yezvasara mainline, yakamanikana-muviri zvikepe kushandura ruzivo rwevatengi uye kugadzira iyo nyowani siginecha mukati - ingangoita 75% kuwedzera kweprimiyamu zvigaro pakusimuka kweNorth America, hombe pamusoro pemabhini, varaidzo yekugara pachigaro chega chega uye neindasitiri inokurumidza kuwanikwa WiFi.
United ichawedzera huwandu hwese hwezvigaro zviripo kunetiweki yepamusha neinosvika makumi matatu kubva muzana pakubva uye kutsiva angangoita mazana maviri-kirasi yemahara majeti ane hombe mainline ndege
Order inotarisirwa kuumba 25,000 inobhadhara zvakanaka, mabasa akabatana kuUnited, zvakadzikira kudzikisira kabhoni pachigaro uye zvinopa inofungidzirwa $ 50 bhiriyoni pagore kuenda kuhupfumi hweUS na2026.
Kana yakabatanidzwa nebhuku renhau renhandare yendege, United inotarisira kuwedzera ndege dzinopfuura mazana mashanu kusanganisira imwe ndege nyowani mazuva matatu muna 500 moga.
United Airlines nhasi yazivisa nezve kutengwa kwendege 270 nyowani dzeBoeing neAirbus - hurongwa hukuru hwakabatanidzwa munhoroondo yendege uye chikuru nemutakuri mumwe mumakore gumi apfuura. Iyo 'United Inotevera' chirongwa chichava neshanduko pane chiitiko chevatengi uye inotarisirwa kuwedzera huwandu hwese hwezvigaro zviripo pakubuda mudzimba neinenge 30%, zvakadzikira kudzikisira kabhoni pachigaro uye kugadzira makumi ezviuru ehunhu, mabasa akabatana na2026, kuyedza kwese kuchave nemhedzisiro, kukanganisika kune hupamhi hweUS.
Kana zvabatanidzwa nebhuku razvino reodha, United Airlines inotarisira kuunza nendege nyowani dzinopfuura mazana mashanu, dzakatetepa-dzemuviri: makumi mana muna 500, 40 muna 2022 uye vakawanda se138 muna2023 nekupfuura. Izvi zvinoreva kuti muna 350 moga, zvikepe zveUnited, paavhareji, zvinowedzera nezve imwe nhete-nendege-nendege mazuva ese matatu.
Ndege nyowani yeUnited - 50 737 MAX 8s, 150 737 MAX 10s uye 70 A321neos - ichauya nemukati mutsva wemasaini unosanganisira varaidzo yekugara-kumashure pachigaro chese mu-ndege yeWiFi, pamwe nekupenya-uye-kunzwa nemwenje ye LED. Ndege inotarisira kubhururuka 737 MAX 8 yekutanga ine siginecha yemukati zhizha rino uye kutanga kubhururuka 737 MAX 10 uye Airbus A321neo kutanga kwa2023.
Chii chimwe, United Airlines inotarisira kukwidzirisa 100% yeiyo mainline, yakatetepa-miviri yezvikepe kune aya matanho ne2025, chirongwa chinoshamisa che retrofit icho, kana chakabatanidzwa pamwe nenhamba yendege nyowani dzinobatana nezvikepe, zvinoreva kuti United ichaendesa mamiriro ayo ehunyanzvi ruzivo kune makumi emamirioni evatengi pane isina kumboitika nhanho.
Iyi odha ichawedzera zvakanyanya huwandu hweUnited hwekufamba kwemazuva ese uye zvigaro zviripo kunhandare yenhandare yeNorth America network, pamwe nenhamba yezvigaro zvepamberi, ese United Kutanga.SM uye Economy Plus®. Kunyanya, United inotarisira kuti ichave paavhareji 53 zvigaro zvepamberi kubva kuNorth America kuenda muna 2026, kuwedzera kweanosvika 75% pamusoro pa2019, uye kupfuura chero mukwikwidzi muNorth America.
"Chiono chedu cheUnited Next chichagadzirisa ruzivo rwekubhururuka United apo isu tichimhanyisa bhizinesi redu kusangana nekumuka kwekufamba nendege," akadaro United CEO Scott Kirby. "Nekuwedzera nekukwidziridza ndege zhinji idzi nekukasira nemasaini edu matsva, tichabatanidza hushamwari, basa rinobatsira neruzivo rwepamusoro mudenga, padandemutande redu rese repasirese. Panguva imwecheteyo, danho iri rinosimbisa basa rakakomba rinoitwa neUnited Nations mukukwidziridza hupfumi hwese hweUS - tinotarisira kuti kuwedzerwa kwendege idzva idzi kuchakanganisa hupfumi munharaunda dzatinoshandira mukugadzirwa kwemabasa, kushandisa vafambi uye kutengeserana. ”